MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအတွက် သတင်းကောင်းရှိတယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ MPT Club မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအားအစဥ်မပျက်အသုံးပြုနေသော အဖွဲ့ဝင်များအား သီတင်းကျွတ်ဂါရဝလက်ဆောင်အနေဖြင့် MPT Club ပွိုင့် (အများဆုံး ၁၀၀၀ ပွိုင့်အထိ) ဆုလက်ဆောင်များ အားပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းတွင် မိမိစုဆောင်းထားသောပွိုင့်များကို MPT Club ၏ ၂၉၉ ပွိုင့်တန်မိုဘိုင်းဆုလက်ဆောင် (Voice/Data/SMS) တစ်ခုခုဖြင့် လဲလှယ်ရန်သာလိုအပ်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလပြီးဆုံးသည့်နောက်တွင် MPT Club မှ ဆုလက်ဆောင်ပွိုင့် (အများဆုံး၁၀၀၀ ပွိုင့်အထိ) များပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဤပရိုမိုးရှင်းသည် (၁၅/၁၀/၂၀၂၁ မှ ၂၁/၁၀/၂၀၂၁) အထိဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဤပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂.၁။ ပထမဦးစွာ MPT Club အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး အနည်းဆုံး MPT ပွိုင့် ၂၉၉ ပွိုင့်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂.၂။ ဤပရိုမိုးရှင်းမတိုင်မီ MPT ဆင်းကတ်အား ရက် (၃၀) အနည်းဆုံးအသုံးပြုထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ဤပရိုမိုးရှင်းသည် ပွိုင့် (၁,၀၀၀) အထိရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေး ဖြစ်ပြီး၊ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများအနေဖြင့် ဤပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းတွင် MPT Club ၏ ၂၉၉ ပွိုင့်တန်မိုဘိုင်းဆုလက်ဆောင် (Voice/Data/SMS) တစ်ခုခုအား MPT4U app (သို့မဟုတ်) USSD channel မှတစ်ဆင့် လဲလှယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄။ အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများအား ဤပရိုမိုးရှင်းတွင်ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၄.၁။ MPT Club ၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ထားသောသူများ၊ MPT ဆင်ကတ်အသုံးပြုခြင်းအား ရပ်တန့်ထားသူများ။
၅။ ဤပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲ၍ ပွိုင့်လက်ဆောင်ရရှိသောကံထူးရှင်များအား အောက်တိုဘာလ (၂၇) နေ့တွင် MPT Club မှ SMS ဖြင့်အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကံထူးသည့် ပွိုင့်ကူပွန်အား MPT4U app တွင်ရှိသော MPT Club -> ကျွန်ုပ်၏ကလပ် -> ကျွန်ုပ်၏ကူပွန်စာမျက်နှာ တွင်သွားရောက်စစ်ဆေးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းဆုလက်ဆောင်ရရှိသည့် ကူပွန်သည်လက်ခံရရှိပြီး (၁၀) ရက်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
၆။ ပရိုမိုးရှင်း၏ အထူးစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြမထားပါက ပါ၀င်သည့် MPT Club အဖွဲ့၀င်များသည် ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုစီအတွက် တစ်ကြိမ်သာရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် (သို့မဟုတ်) ဆုများကိုသာ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၇။ အကယ်၍ MPT မှ MPT Club အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းပါသတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု အကျိုးအကြောင်းသင့်စွာဆုံးဖြတ်လျှင်၊ MPTအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ MPT Club အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ ရက်ပေါင်း (၃၀) ကြာ အသိပေးပြီးနောက် ပရိုမိုးရှင်းပါသတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်မှု (သို့မဟုတ်) အလွဲသုံးစားပြုမှုတို့၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် MPT Club အဖွဲ့ဝင်၏ MPT Club အကောင့်ရှိ MPT Points များကို လျော့ချခြင်း(သို့မဟုတ်) တိုးမြှင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
MPT Club မှ ၂၉၉ ပွိုင့်တန် မိုဘိုင်းဆုလက်ဆောင် (Voice/Data/SMS) အား လဲလှယ်ရန်
Q1. MPT Club သီတင်းကျွတ်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်မလဲ။
MPT Club အဖွဲ့ဝင်များသာပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဤပရိုမိုးရှင်းကိုရယူရန်သင်သည် MPT Club အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်နှင့်အနည်းဆုံး MPT ပွိုင့် ၂၉၉ ပွိုင့် ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းကာလမတိုင်မီရက်ပေါင်း ၃၀ ဆက်တိုက် MPT ဆင်ကတ်အား အသုံးပြုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Q3. ဒီပရိုမိုးရှင်းရဲ့ ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
MPT Club မှ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် SMS မှတဆင့်ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီး MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းရှိ MPT Club -> ကျွန်ုပ်၏ကလပ် -> ကျွန်ုပ်၏ကူပွန်စာမျက်နှာ သင်၏ အများဆုံးပွိုင့် ၁,၀၀၀ အထိကူပွန်အားသွားရောက် စစ်ဆေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Q4. MPT Club ကိုမည်သို့အဖွဲ့ဝင်ရမလဲ။
MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း (သို့မဟုတ်) *345# ကိုခေါ်ဆို၍ MPT Club သို့အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါသည်။
Q5. MPT Club ၏ 11.11 Promotion နှင့် Tazaungtaing Promotion များတွင် မည်သည့်အစီအစဉ်များပါ၀င်သနည်း။
၎င်းပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်များတွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအစီအစဥ်များပါဝင်ပါသည်။ ထိုအစီအစဥ်များအား ဆက်လက်ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Eliza Skin Republic မှ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော သီတင်းကျွတ် လျှော့စျေးအစီအစဥ်ရှိတယ်နော်။
အဲဒါကဘာပါလဲ။ အဲဒါကတော့ MPT Club ၏ Platinum အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ၅၀၀၀ ကျပ်လျှော့စျေး၊
Diamond အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်လျှော့စျေးနှင့်၊ Crown အဖွဲ့ဝင်များအား ၁၅၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေးအစရှိတဲ့ လျှော့စျေးလက်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Eliza Skin Republic သို့သွားရောက်၍ ယခုပဲလျှော့စျေးလက်ဆောင်များ ရယူလိုက်ကြရအောင်။
အသေးစိတ်အကြောင်းအရာအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
၁။ ဤပရိုမိုးရှင်းသည် (၁၆/၁၀/၂၀၂၁ မှ ၃၁/၁၀/၂၀၂၁) အထိဖြစ်ပါသည်။
၂.၁။ MPT Club ၏ (Platinum ၊ Diamond နှင့် Crown) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃။ Eliza Skin Republic မှပေးအပ်သောလျှော့စျေးပရိုမိုးရှင်းအားရရှိရန်၊ ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရရှိသော MPT Club ၏ (Platinum ၊ Diamond နှင့် Crown) အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် MPT Club Member Level အား Eliza Skin Republic ဆိုင်များ၌ ပြသရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄။ Eliza Skin Republic မှပေးသောလျှော့စျေးပရိုမိုးရှင်းသည် လူဦးရေကန့်သတ်ချက်ရှိပါသည်။ ကန့်သတ်ထားသော လူဦးရေအရေအတွက်များမှာ (Platinum = ၁၀၀၊ Diamond = ၁၀၀ နှင့် Crown = ၁၀၀) အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
၅။ ဤပရိုမိုးရှင်းသည်သတ်မှတ်ထားသောပါဝင်ဆင်နွှဲသူ အရေအတွက်ရောက်သောအခါတွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်သောလျှော့စျေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၆.၁။ Platinum အဖွဲ့ဝင်အတွက် ၅,၀၀၀ ကျပ်လျှော့စျေး (deep cleansing and facial massage မှလွဲ၍ ကျန်သည့် all facial treatments အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။)
၆.၂။ Diamond အဖွဲ့ဝင်အတွက် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်လျှော့စျေး (deep cleansing and facial massage မှလွဲ၍ ကျန်သည့် all facial treatments အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။)
၆.၃။ Crown အဖွဲ့ဝင်အတွက် ၁၅,၀၀၀ ကျပ်လျှော့စျေး (deep cleansing and facial massage မှလွဲ၍ ကျန်သည့် all facial treatments အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။)
၇။ ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်စုံတစ်ခု ကြုံတွေ့ပါက MPT Club ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါသည်။
Q1. MPT Club Partnership ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်မလဲ။
Platinum, Diamond နှင့် Crown အစရှိသော MPT Club အဖွဲ့ဝင်များသာပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဤပရိုမိုးရှင်းကိုရယူရန်သင်သည် MPT Club ၏ (Platinum, Diamond နှင့် Crown) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး MPT Club Member Level အား Eliza Skin Republic ဆိုင်များတွင်ပြသပြီး လျှော့စျေးများရယူနိုင်ပါသည်။
Q3. ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် လူဦးရေကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
လူဦးရေကန့်သတ်ချက်ရှိပါသည်။ ပထမဦးဆုံအယောက် (Platinum = ၁၀၀၊ Diamond = ၁၀၀ နှင့် Crown = ၁၀၀) ဖြစ်ပြီး၊ Platinum အဖွဲ့ဝင်အတွက် ၅,၀၀၀ ကျပ်၊ Diamond အဖွဲ့ဝင်အတွက် ၁၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့် Crown အဖွဲ့ဝင်အတွက် ၁၅,၀၀၀ ကျပ်လျှော့စျေးများပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q4. MPT Club Member Level အား ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ။
MPT Club Member Level အား ရရှိရန် *345*1# ခေါ်ဆိုရယူနိုင်ပါသည်။
Q5. MPT Club ကိုမည်သို့အဖွဲ့ဝင်ရမလဲ။
Q6. MPT Club ၏ Single Day Promotion – 11.11 နှင့် Tazaungtaing Promotion များတွင် မည်သည့်အစီအစဉ်များပါ၀င်သနည်း။